မုန့်လက်ဆောင်း | Danuphyu Daw Saw Yee (London)
မုန့်လက်ဆောင်းဖတ်လုပ်နည်းကိုသမီးလေးမွေးပြီကာစ အိသက် facebook ပေါ်မှာတင်ဖူးပါတယ်နော်။ အခု ဒီနည်းလေးက နိုင်ငံခြားမှာ ဆန်ကြမ်းကြိတ်မရနိုင်ရင်လုပ်လို့လွယ်တဲ့ နည်းပေါ့နော်။ကလေးတွေ ၂၀၁၁ မွေးနေ့ပွဲမှာ ရွှေရင်အေးပါ ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက မုန့်လက်ဆောင်းက ဒီနည်းနဲ့လုပ်တာပါ။အရမ်းအဆင်ပြေပြီး လုပ်ရလွယ်တဲ့နည်းလေးမို့ပြောပြချင်ပါတယ်။
၁။မတ်ပဲအမှုန့် ( mung bean flour- ၇၅ ဂရမ်)
၂။ဆန်မှုန့် ( rice flour -၆၀ဂရမ်)
၃။သာကူအမှုန့်( tapioca flour -၃၀ ဂရမ်)
၄။ရေ ( ၁လီတာ )
၅။ဆွမ်းမွှေး ကြိတ်မှန်ရည် pandan paste (အရောင်အနုအရင့်ကြိုက်သလောက်သုံးပါရှင်)
မတ်ပဲအမှုန့်၊ ဆန်မှုန့် ၊ သာကူအမှုန့် တို့ကို ရေ ၆၀၀ မီလီ လီတာဖြင့် ဖျော်ပြီး မကပ်သောအိုးထဲကို ထဲ့ကာ မီးအေးအေးဖြင့်တည်ပေးပါ။ တဖက်တည်းကို မွှေပေးနေပါ။
အနဲငယ်ပျစ်လာရင် လက်ကျန်ရေကို နဲနဲစီထဲ့လိုက် မွှေလိုက်ဖြင့်နောက်ဆုံးမှာ လုံးဝပျစ်ခဲကာ အရောင်ပြောင်လာပါမယ်။
ဆွမ်းမွှေးရည် အရောင်နု၊ ရင့် ကြိုက်သလိုထဲ့ မွှေပြီး တော်တော်ပျစ်လာပြီ အရောင်လဲပြောင်လာပြီဆိုမှ အောက်ကရေခဲထဲ့ထားသော ရေခဲရည်ထဲသို့ ဇကာပေါက်ပါသောခွက်ထဲကို မုန့်ရည်ကိုထဲ့ပြီး ဖြေးဖြေးချင်းကိုဖိချပါ။
potatoes masher , pasta press လို့ ခေါ်တယ်။ ဘေးက အပေါက်တွေပါတဲ့ ဟာတွေက အဖတ်သိပ်မလှဘူး။ အောက်ဖက်ပဲ အပေါက်လေးတွေပါမှ ကောင်:တာ
ရေခဲရေကိုခဏခဏလဲပေးရပါမယ်နော် ဘာလို့ဆိုတော့အပေါ်ကကျလာတဲ့အပူမုန့်ရည်က အောက်က ရေခဲရည်ကြောင့်
အခဲသဏ္ဍာန်ပြောင်းသွားတာပါနော်။ ရေအေးမှ မုန့်အပူက အခဲသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပါမယ်။
By eithet • Posted in ကိုယ်တိုင်လုပ်စားဖွယ်	• Tagged flour
77 comments on “မုန့်လက်ဆောင်း”
02/03/2012 @ 10:32 am
ma yay htone nae alum pic ko tin pay loh ya lar please! i tired to look for them at indian gorcery! but can’t find it~ thanks .. pe top padan flavour ka indian shop mhar mal buy ya tar lar sis? thu dot ko may tot ma shi woo loh pyaw loh
02/03/2012 @ 2:36 pm
ok sis yay. i will do tonight naw. u can buy pendan paste or starch in thai shop or chinese shop.naw
03/03/2012 @ 9:32 pm
i alreay post the photo nyi ma lay.
i already post the photo nyi ma lay.
03/03/2012 @ 12:46 pm
Hote! thanks alot ❤
03/03/2012 @ 7:49 pm
ညီမရေ….ညီမရဲ့ဒီ website လေးကိုအရမ်းကြိုက်တာပဲ..ဖတ်ခွင့်ရတာ အရမ်းလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်…အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း အမြဲအားပေးလျှက်ပါနော်….
ညီမကိုမေးချင်တာလေးက ကျောက်ချဉ်နဲ့ ထုံးကိုပြည်ပမှာ ဘယ်လိုခေါ်ပြီး ဘယ်လိုဆိုင်မျိုးတွေမှာရနိုင်သလဲလို့ပါ…အားမှဖြေပေးပါနော်… ကျေးဇူးအထူးပါ….
03/03/2012 @ 9:22 pm
ကျောက်ချဉ်နဲ့ ထုံးကို lime stone , alum ခေါ်ပါတယ်မရေ. thank u naw.
04/03/2012 @ 2:04 am
Please tell me where you can buy alum and lime stone. thanks.
04/03/2012 @ 10:58 am
i hv got them from Indian Grocery Shop sis.
05/03/2012 @ 5:36 pm
Thanks dear Ei Thet for sharing your nice recipes.
05/03/2012 @ 7:45 pm
welcome sis .
05/03/2012 @ 7:14 pm
10/03/2012 @ 3:18 am
မ ရေ ဆန်မှုန့်ကလေ အစိမ်းလားအကျက်လား ဆွမ်းမွှေးရည်ကရောဘယ်လိုဝယ်ရမလဲဟင်…
မရဲ့ ဖေ့ဘုတ်ကနေ ဓါတ်ပုံလေးတွေကြည့်ဖြစ်တယ် ခု ဒီဘလော့ဂ်လဲဝင်ဖတ်ဖြစ်တယ် အရမ်းတော်တဲ့ အမကိုအားကျတယ် သိလား ဘေဘီလေးတွေအတွက်ရော ချစ်ချစ် အတွက်ရော ဟင်းချက်တာရော ကိုယ့်ကိုကို လှပအောင်ပြင်တာရော ဘက်စုံကိုလုပ်ပေးနိုင်တယ်နော် ဒီလိုမျိုး ကိုစားကောင်းအောင်လုပ်ထားသလို တခြားသူကိုဝေမျှတာလဲ အရမ်း လေးစားတယ် အဲဒါမျိုးလေးတွေရှိမှညီမတို့လဲလိုက်လုပ်စားလို့ရမှာ.နော် နောက်လဲ စားကောင်းတဲ့စားစရာလေးတွေကို ကိုယ်ကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာနဲ့ ပြုလုပ်နိုင်ပီးချစ်တဲ့ မိသားစုနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာနေနိုင်ပါစေနော် မ 🙂
10/03/2012 @ 11:02 am
ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ရပါ စံရေ ခုမှနိုးတာ။ ရိုးရိုးဆန်မှုန့်ကိုသုံးပါညီမရေ။ မကတော့ဆွမ်းမွှေးရည် panden paste ကို တရုတ်ဆိုင်မှာဝယ်ပါတယ်။ website ကိုလာလည်တာ ကျေးဇူးပါနော်။
10/03/2012 @ 3:45 am
ခုနက ရေးထားတဲ့ စာဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့် မ ရေ ဆန်မှုန့် ကအကျက်လား အစိမ်းလားဟင်
အမကို အားကျတယ်လို့ဘက်စုံတော်လို့ ပီးတော့ဟင်းတွေ ချက်ပီး ညီမတို့ သိအောင် တင်ပေးတာ ကျေးဇူး ကျေးဇူး နော် မ မ ကိုယ်ကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာ မိသားစုနဲ့ သက်ဆုံးတိုင် နေရပါစေ 🙂
11/03/2012 @ 9:06 pm
how many (ml) to use forးထုံးကျက်တတ်ရည်. thks
12/03/2012 @ 7:57 pm
just use 1 tea spoon lime stone with 1 litre water.
28/03/2012 @ 4:55 pm
ma yey tapioca flour asa ba thon lol ya lay him.zinmar, mah ma shi lol pa.thankz.
28/03/2012 @ 7:00 pm
i have just tried with tapioca flour nyi ma lay. if u want try with corn flour or glutinous flour but i hv never tried with them. good luck naw. 🙂
31/03/2012 @ 5:41 pm
ဆွမ်းမွှေးရည်ကို English လို ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲရှင်။ ညီမလဲ UK မှာပါ။ ဆွမ်းမွှေးရည်၊ ကျောက်ချဉ် နဲ့ ထုံး ကို ဘယ်မှာ ၀ယ်လို့ရသလဲ သိချင်ပါတယ်။ ထုံးက ဘယ်လောက် အချိုးအဆ ထည့်ရပါသလဲဆိုတာလဲ ပြောပေးပါနော်။ သင်္ကြန်နီးလာပြီဆိုတော့ အိမ်မှာ မုန့်လက်ဆောင်းလုပ်စားမလို့ပါ. ကျေးဇူးပါနော် မမ။
31/03/2012 @ 10:44 pm
pandan leave လို့ခေါ်ပါတယ်။ ညီမရေ ကုလားဆိုင်မှာဝယ်လို့ရပါတယ်နော် 🙂
08/04/2012 @ 3:27 pm
You can get it from Asian grocery shop as Wingyip chinese store.It is called pandan paste 🙂
08/04/2012 @ 1:08 pm
ညီမလေးရေ..ထုံးကျတ်တိုက်ရေ ကို ကြိုတဲ့ နေရာမှာဘယ်လောက် အချိုးအဆ ထည့်ရသလဲဆိုတာနဲ့ဆန်မှုန်နဲ့ ကော်မှုန့် ကြိုတဲ့ အခါ ရေ ကိုလည်းဘယ်အချိုးစားလောက်ထည့်ရသလဲဆိုတာ ..ညီမ အားရင်ဖြေပေးပါအုံး
အစ်မ စမ်းလုပ်ကြည့်ချင်လို့ ပါ ..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..ခုလိုဝေမျှပေးလို့ 
09/04/2012 @ 11:54 pm
အမှုန့်၂ခွက်ကို ထုံးရေကြည် ၇ခွက် ထဲ့ပါ မရေ 🙂
11/04/2012 @ 3:24 am
11/04/2012 @ 8:58 am
🙂 welcome par ma moe yay.
18/04/2012 @ 5:01 am
Thanksalot, ma. I am at Nagoya, Japan. Wanna try Mote Lat Saung foralong time. Thanks for sharing us. 🙂
18/04/2012 @ 8:44 am
yamin yay, good luck naw 🙂
thi thi aye
30/04/2012 @ 7:07 am
ama yay..after we make these..how long can we keep it for?
30/04/2012 @ 8:30 pm
a week in fridge nyi ma lay 🙂
Kyawt Kyawt Swe
01/05/2012 @ 7:09 pm
ထုံး နဲ့ကျောက်ချဉ်က ဘယ်လောက်အချိုးထည့်ရမှာလဲ မ ရေ့..ကျေးဇူးပြုပြီးေ ပြာပြပေးပါနော်…ငါးအမွကြော်လေးလဲ လုပ်စားပြိးပြီ စားလို့အရမ်းကောင်းတာပဲနော်…ကျေးဇူးပါ မအိသက်ရေ့
31/05/2012 @ 8:51 pm
ကြိုတဲ့အခါ ထုံးမပါဘဲ ကျောက်ချဉ်ချဉ်းဆိုရင်ရော ရပါလား။ ပြောပြပါနော်
31/05/2012 @ 10:59 pm
it will be better with both 🙂
31/05/2012 @ 9:11 pm
mama yay… I dun know how to type burmese font. so let me use burglish. after mixing rice powder and topioca starch, do i have to stir while it is heating on the stove. i already made it. but the one that i did wasnt sticky. so i only got liquid mont lat saung 😦
31/05/2012 @ 11:05 pm
yes nyi ma lay, u need to keep string for good result and dont add too much water naw .:)
01/06/2012 @ 9:32 pm
thank you.i think may be i put too much water on last time 😀
01/06/2012 @ 11:21 pm
02/06/2012 @ 2:32 am
thanks again.. mama… finally i can make it 😀
03/06/2012 @ 10:19 am
i am happy nyi ma lay 🙂
05/07/2012 @ 10:23 pm
ma eithet yae, i tried to do mont lat song.. but mine won’t go into solid.. 😦 i put lots of ice in the water below, and cook the mix an hour or evenalittle more.. but when i put it into ice water, it won’t go solid.. pls tell me “water and powder a-choe” again ma yay.. i like mont lat songalot but now cannot make it yet.. 😦 😦
06/07/2012 @ 8:48 pm
ညီမရေ အဲဒါမုန့်သားပျစ်ခဲမနေခင် စစ်ချလို့ပါ စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး ပျစ်ခဲနေသည်အထိကျိုကြည့်ပါနော် 🙂
23/08/2012 @ 3:22 pm
24/08/2012 @ 8:48 pm
24/08/2012 @ 8:14 pm
HOW MUCH I NEED ALUM FOR 1 LITRE WATER PLEASE.
24/08/2012 @ 8:47 pm
28/08/2012 @ 9:19 pm
28/08/2012 @ 9:42 pm
welcome sis 🙂
27/09/2012 @ 8:14 pm
Thank you so much A Ma,
I was looking for this suchalong times and finally I got the way how to make it from you A Ma….Thankalot….
27/09/2012 @ 11:14 pm
pls do try Nyi Ma Lay 🙂
22/10/2012 @ 7:16 pm
ညီမရေ….ပထမတခါလုပ်တာ ပျက်သွားလို့ထပ်မေးပါရစေ..ကျောက်ချဉ်ဆိုတာ စိမ်ထားရင်းက လုံးဝပျော်သွားတဲ့အမျိုးလား..အခဲလေးကျန်ခဲ့ရတာလား..အမ ပထမတခေါက်လုပ်တုန်းက တညစိမ်ထားတာ သူကငုတ်တုတ်ကငုတ်တုတ်ပဲ..လုံးဝမပျော်ဝင်သလိုပဲမို့…ကျန်ရတာမျိုးဆိုရင် ကျန်နေသေးတဲ့အခဲလေးနဲ့ ထုံးအနှစ်ကို ထည့်သုံးရတာလား.ချန်ထားပြီး အပေါ်ရေကြည်လေးပဲယူရမှာလား အားမှဖြေပေးပါညီမရေ…ကျေးဇူးအထူးပါ…
19/11/2012 @ 10:27 pm
ညီမအိသက်ရေ….. မုန့်လက်ဆောင်းဖတ်လုပ်ပြီးရင် ဘယ်နှစ်ရက်ထားလို့ ရလဲဟင်။ ဘယ်လိုသိမ်းရမလဲ ပြောပြပေးပါအုံးနော်.
21/11/2012 @ 6:38 pm
u can keep 3-4 days in fridge 🙂
27/12/2012 @ 5:50 am
အသံတိတ် အမြဲအားပေးနေတဲ့သူပါ ဒီလိုနည်းလေးတွေတင်ပေးတာ အမြဲကျေးဇူးတင်နေပါတယ် တခုလောက်မေးချင်လို့ပါနှော် ထုံးကျက်တတ်ရေ2လီတာရဖို့အတွက် ကျောက်ချဉ်ကလက်သည်းခွံ နှစ်ခုလောက်ပေါ့နှော် ထုံးကရော ဘယ်လောက်ပမာဏလောက်ထည့်ရမလဲအမ
29/12/2012 @ 5:41 pm
tea spoon of ထုံး lime stone naw sis. really appriciate u support me naw
12/01/2013 @ 3:32 am
ဒီလိုမျိုး ချက်နည်းပြုတ်နည်းအမျိုးမျိုးကို ဆရာစားမချန်ပဲသေချာ စနစ်တကျ တဆင့်ချင်းရှင်းပြပြီး မျှဝေတဲ့အတွက် ညီမလေးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်။ အထူးသဖြင့်အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားပြီး အမြဲအဆင်မပြေဖြစ်တဲ့ ပဲပြုတ်နဲ့မုန့်လက်ဆောင်းဖတ်နဲ့ကို ညီမလေးရဲ့နည်းတွေနဲ့လုပ်တော့ တခါတည်းနဲ့အဆင်ပြေသွားလို့ကျေးဇူးအထူးပါ။ သာကူပြင်လဲညီမလေးနည်းနဲ့လုပ်တာ အရမ်းစားကောင်းတာပဲ။ ဒီလိုဇွဲလဲရှိ စေတနာလဲကောင်းတဲ့ ညီမလေးဒီထက်မကအောင်မြင် တိုးတတ်ပျော်ရွင်ပါစေနော်။
13/01/2013 @ 6:33 pm
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မရေ အဲဒီလို လာရေးပေးတာအရမ်းပျော်တာပဲ ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေရှင် 🙂
22/01/2013 @ 6:12 am
မုန့်လက်ဆောင်းဖတ်လုပ်လို့ရသွားလို့ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် အသေးစိတ်ပြန်ပြောပေးတဲ့အတွက်လဲ ပိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကွန်မန့်မထားဖြစ်ပေမယ့် အမြဲလာဖတ်ဖြစ်ပါတယ် အမနည်းလေးတွေနဲ့အဆင်ပြေနေလို့လဲ စိတ်ထဲမှာအမြဲကျေးဇူးတင်နေပါတယ် အမ ဒီထက်ပိုပြီး နည်းလေးတွေ ဝေမျှပေးနိုင်ပါစေလို့
28/01/2013 @ 4:15 am
May I ask you some questions? Why you use Alum and Lime stone? What is the function of it? May I do it without? I understand the ratio for rice flour to tapioca is 10:3 but the measurement ‘hin kat zoon’ is equal to ‘1 cup’ ? According to your recipe, it needs2liters of ‘htone kyat tat’ for 13 spoons. Please tell me how many hin kat zoon is equal to 1 cup. Thank you so much. By the way, I am from USA and haven’t had ‘mote latt saung’ for decades. I am so glad to found your page and can’t wait to try your recipes. Thanks again for your time and effort to keep this website so interesting.
28/01/2013 @ 6:18 pm
3 cooking spoon equal to 1 rice cooker cup sis. u can do withoout alum and lime stone. they are used for correct texture 🙂
14/02/2013 @ 8:01 am
Thank you for your reply Ma Ei Thet.
07/03/2013 @ 7:32 am
07/03/2013 @ 3:18 pm
အခုနည်းက အချိုးက ဖာလူဒါခွက်၃၀လောက်ထွက်ပါတယ်။ ၃ဆလောက်လုပ်လိုက်ပါ 🙂
16/03/2013 @ 11:28 pm
thank you soo much Ei Thet yay…
for sharing..I haven’t try it yet but will definitely do when the weather is warmer.
20/03/2013 @ 9:27 pm
Ama yay . It doesn’t work for me. I am such an idiot. I don’t know where it went wrong. I mixed 10 spoons of rice flour and3spoons of tapioca starch and 1 litre of mixed lime stone and Alum which is clean surface water. After that I boiled them with low temperature. After few minutes , it went into thick texture. And I followed ur instructions , after all they dissolved back in water and all I can taste was rice flour but came out nice though. Please help me ama .. I tried twice already . Byaeeeeee !___!
22/03/2013 @ 12:09 am
it shoul be really really sticky nyi ma lay . and the waterin the bowl should be could as ice water . i am so sorry to hear that it did not turn out right for u 😦
01/04/2013 @ 6:59 pm
02/04/2013 @ 11:00 pm
အမရေ tapioca flour ကိုနဲနဲပိုထဲ့ကြည့်ပြီး ရေကိုအနဲငယ်လျှော့ထဲ့ကြည့်ပါနော်။ တော်တော်ကိုပျစ်ခဲနေရပါတယ် မစစ်ချခင်လေ 🙂
10/04/2013 @ 2:38 am
Hi.,Thank you for your recipe.I try6time in 1 week.Each time i use 16 oz rice flour,3oz tapioca flour,same amount of hton(lime) & alum.Difference amount of water & cooking time.The best water amount is 2.5 litter & cooking time is after boil,keep stir in medium heat for 20 min.All6time is Good.This raw amount came out5quart ice cream bucket.I ate with3to5timeaday.I love to enjoy.Oh, I” m in Los Angele.
THANK YOU,THANK YOU> THANK YOU>.
10/04/2013 @ 11:26 pm
wow ! thanks for ur comment. that is so sweet of you 🙂
Pingback: MyanmarEating.com Blog » Blog Archive » ဖာလူဒါလုပ်နည်း
12/04/2014 @ 5:15 am
မနေ့ က ရွှေရင်အေးလုပ်လို့ မုန့်လက်ဆာင်းဖတ်ကို အိသက်နည်းလေးနဲ့ လုပ်ဖြစ်တယ်…ပထမဆုံးအကြိမ်ဆို တော့ ထုံးနဲ့ ကျောက်ချဉ်ကို ဘယ်လောက်ထည့်ရမှန်းမသိလို့ ထုံး၂ဇွန်း နဲ့ ကျောက်ချဉ်အတုံးကြီးတစ်တုံးကို ညကတည်းက စိမ်ထားလိုက်ပြီ မနက်ကျ ကျို တာပေါ့ နော် အဲ ကျို ပြီးတော့ မြည်းလိုက်တော့ မှ တော်တော်ချဉ်ပြီး ထုံးအရမ်းများနေမှန်းသိလိုက်တယ် 🙂 အဲ့ဒါနဲံ နည်းနည်းပဲထည့်ခိုင်းတာထင်တယ်ဆိုပြီး ထုံးနည်းနည်းလေးနဲ့ ကျောက်ချဉ်သေးသေးလေးကို ခဏလေးပဲစိမ်ပြီးထပ်လုပ်လိုက်တာ အောင်မြင်သွားတယ် အိသက်ရေ… အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်နော်..facebook မှာတောင် တင်ဖြစ်တယ် ဖုန်းနဲ့ တင်လိုက်တော့ သေသေချာချာတောင်ကျေးဇူးတင်စကားမပြောလိုက်ရဘူး..
ွှThank you & Happy Myanmar New Year
15/04/2014 @ 12:48 am
thanks for let me know parama yae 🙂 Happy Burmese New Year ❤
12/04/2014 @ 5:22 am
မနေ့ က ရွှေရင်အေး ဝေမှာမို့ မုန့်လက်ဆောင်းဖတ်လေးအိသက်နည်းလေးနဲ့ လုပ်ဖြစ်တယ်…ပထမအကြိမ်ဆိုတော့ ထုံး၂ဇွန်းနဲ့ ကျောက်ချဉ် အတုံးကြီးတစ်တုံး ညကတည်းက စိမ်ပြီး မနက် ကျိုတာပေါ့ အဲ ကျိုလို့လည်းပြီးရော မြည်းလိုက်တော့မှ ချဉ်ပြီး ထုံးအရသာဖြစ်နေလို့ နည်းနည်းပဲထည့်ရတာထင်တယ်ဆိုပြီး ထုံးနည်းနည်းလေးနဲ့ ကျောက်ချဉ်သေးသေးလေးခဏစိမ်ပြီး ထပ်လုပ်လိုက်တာ အောင်မြင်သွားတယ် …အရမ်းပျော်ပြီး အိသက်ကိုလည်း ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်…fb မှာတောင် အိသက်ကို tag ထားသေးတယ်..သွားဝေရင်း လမ်းက နေ ph နဲ့ post တင်လိုက်တော့ သေသေချာချာကျေးဇူးတင်ကြောင်းမပြောလိုက်ရဘူး…
“Thank you and Happy Myanmar New Year”
17/04/2014 @ 12:22 am
အိသက်ရဲ့နည်းလေးတွေနဲု့ဘုန်းတော်ကြီးများအတွက်အလှူကပ်တဲ့အခါအရမ်းအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။ပြည်ပရောက်မြန်မာများအတွက် သက်ရဲ့တိတိကျကျပုံများ၊အခေါ်များနဲ့အတူစေတနာအပြည့်နဲ့တင်ပေးတာတွေက အရမ်းကိုအကျိုးရှိတာပဲ။ကျေးဇူးအထူးပါနော်။အကြိုက်ဆုံးမြန်မာအစားအစာ website ပါဘဲ။ သက်ပို့ပေးတဲemail ကပို့စ်တွေကိုအရမ်းချစ်လို့ FB မှာရှယ်လို့ရလားဟင်။. The best Burmese Food Website I ever seen.
17/04/2014 @ 1:35 am
ရပါတယ် အမရေ FB မှာ ရှယ်ပေးမယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူးတောင်တင်ပါတယ် ဘုန်းဘုန်းတွေ အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ ပျော်တောင်ပျော်သေးတယ် ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့စာလေး ရေးပေးတာလဲ အလွန်ကြည်နူးရပါတယ် ❤
08/05/2014 @ 3:18 am
မုန့် လက်ဆောင်းလုပ်နည်းလိုချင်နေတာ အိသက်ထဲဝင်ကြည့်မှ လိုချင်တာတွေ အများကြီးတွေ့ ရတယ် ကျေးဇူးအများကြီးတင်မိတယ်..။